ရှောငျလှဲရခကျတဲ့ ဝကျခွံ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
လူတိုငျးလူတိုငျးဟာ တဈသကျမှာတဈခါလောကျတော့ ဝကျခွံပွဿနာကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။
အရပွေားရဲ့အဆီဂလငျးတှကေနေ အဆီတှအေမြားကွီးထှကျလာပွီး မှေးညငျးပေါကျတှကေိုပိတျတဲ့အခါ ဝကျခွံဆိုတာဖွဈလာတော့တာပါပဲ။ ခြှေးပေါကျကကွီးရငျ ဆားဝကျခွံဆိုတဲ့ အမညျးစကျတှဖွေဈတော့တာပေါ့။ တကယျလို့အပေါကျကသေးသေးလေးဆိုရငျတော့ အဖွူရောငျအဆီဖုကလေးတှေ ဖွဈလာပါတော့တယျ။ ဒီလိုခြှေးပေါကျပိတျတာနှဈမြိုးလုံးက ရောငျရမျးတာတှေ၊ ဝကျခွံတှေ၊ အဖုအကွိတျတှေ ဖွဈလာတော့တာပေါ့။ ဝကျခွံအဖုအကွိတျကွီးတှေ အရပွေား‌အောကျမှာ နီရဲရောငျရမျးလာပွီး အရမျးကွီးလာတဲ့အခါ ဆငျဝကျခွံလို့ချေါတဲ့ ဝကျခွံအမြိုးအစားတှဖွေဈလာတော့တာပေါ့။
ဝကျခွံဆိုတာ ဆယျကြျောသကျအရှယျ၊ အဆီပွနျတတျသူ‌တှမှော ဖွဈတာမြားပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျဝကျခွံဟာ ၅နှဈကနေ၁ဝနှဈလောကျအထိ ကွာတတျပွီး အသကျ၂ဝအစောပိုငျးလောကျမှာ သကျသာသှားတတျကွပါတယျ။ မကျြနှာမှာအဖွဈမြားတယျဆိုပမေယျ့ လညျပငျး၊ ရငျဘတျ၊ ကြောကုနျး၊ ပုခုံးနဲ့ လကျအပျေါပိုငျးတှမှော ဖွဈတာမြားပါတယျ။
အလှဲကွီးလှဲနတောတှကေ ဝကျခွံဆိုတာ အစားအသောကျကွောငျ့၊ မသနျ့ရှငျးတာကွောငျ့၊ လိငျစိတျထကွှတာတှကွေောငျ့ဖွဈတာမြိုး မဟုတျပါဘူး။ မြိုးရိုးနဲ့ ဟျောမုနျးတှကေ ဝကျခွံအမြားစုရဲ့ အဓိကတရားခံပါ။ ခြော့ကလကျရှောငျတာ၊ မကျြနှာကိုတဈနေ့၁ဝကွိမျလောကျသဈတာလောကျနဲ့တော့ ဝကျခွံကပြောကျသှားမှာမဟုတျပါဘူး။
>> ဒါဆိုရငျ ဝကျခွံဘာကွောငျ့ဖွဈရသလဲ?
ဟျောမုနျး : ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာစတဲ့ဝကျခွံဟာ ဟျောမုနျးထုတျလုပျမှုမြားလာလို့ဖွဈတာပါ။ လူပြို၊ အပြိုဖျောဝငျခြိနျမှာ အမြိုးသားဟျောမုနျး တကျစတိုစတီရုံးထုတျတာမြားတာကွောငျ့ အဆီဂလငျးကနေ အဆီတှပေိုထှကျလာပါတော့တယျ။
ဘတျတီးရီးယား : အဆီတှပေိုလြှံနခွေငျးကွောငျ့ မကျြနှာ၊ လညျပငျး၊ နောကျကြောနဲ့ ရငျဘတျတှမှောရှိတဲ့ မှေးညငျးပေါကျကလေးတှပေိတျသှားတတျပါတယျ။ ဒီလိုပိတျနတေဲ့ခြှေးပေါကျတှထေဲ ဘတျတီးရီးယားတှပေေါကျဖှားလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရပွေားပျေါမှာ အဆီဖုတှေ၊ ဆားဝကျခွံတှေ ထှကျလာတော့တာပေါ့။ တဈခါတဈလေ ဒီအဖုတှရေဲ့ဖိအားကွောငျ့ မှေးညှငျးပေါကျနံရံတှပေေါကျထှကျပွီး ဘေးပတျဝနျးကငျြတဈရှူးတှကေို အဆီတှစေိမျ့ထှကျတဲ့အခါ ရောငျရမျးဝကျခွံဖွဈတော့တာပေါ့။ ဒီ့ထကျပိုကွီးပွီး ပိုနာလာတဲ့အခါ ဝကျခွံဖုကွီးဖွဈလာပါတယျ။
ကိုယျဝနျတားဆေးအမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး တဈခြို့တှကေ ဝကျခွံကိုပိုဖွဈစပွေီး တဈခြို့တှကေ ဝကျခွံဖွဈတာကိုတားဆီးပေးနိုငျပါတယျ။ တဈခြို့တားဆေးထိုးဆေးတှနေဲ့ သားအိမျတှငျးထညျ့ပစ်စညျးတှဟောလညျး ဝကျခွံကိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ တဈခြို့အလေးမသမားတှနေဲ့ အားကစားသမားတှသေောကျတဲ့ စတီးရိုကျတှကေလညျး ဝကျခွံဆိုးဆိုးရှားရှားဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ဝကျခွံအမြိုးအစားတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ မှေးကငျးစလေးတှနေဲ့ လသားလေးတှေ၊ အထူးသဖွငျ့ ယောင်ျကြားလေးတှမှောဖွဈတဲ့ ဝကျခွံမြိုးကို acne neonatorum, acne infantum လို့ချေါပါတယျ။ ဝကျခွံလိုအနီကှကျလေးတှမေကျြနှာမှာပျေါလာပွီး ရကျသတ်တပတျအတှငျးမှာတငျ ဘာမှမဖွဈဘဲ ပြောကျသှားတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လသားလေးတှမှောဖွဈတဲ့ acne infantum ကတော့ ဖွဈတာပိုကွာ၊ ပိုဆိုးပွီး အမာရှတျတှကေနျြတတျပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျဘဝမှာ ဝကျခွံတဈလုံးမှမပေါကျခဲ့ဘဲ အသကျကွီးလာမှ လူကွီးဝကျခွံတှပေေါကျလာတာမြိုးလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ androgen မြားလာလို့ပေါကျတာဆိုပမေယျ့ ဆရာဝနျတဈခြို့ကတော့ ဝကျခွံထထပေါကျတယျဆိုတာ androgen ဟျောမုနျးပမာဏထကျ အဆီထှကျနှုနျးနဲ့ ဝကျခွံဖွဈစတေဲ့ဘတျတီးရီးယားပိုးကို လူ့အရပွေားတုနျ့ပွနျမှုအ‌ပျေါမှာပဲ မူတညျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ Propionibacterium acnes ဆိုတဲ့ဘတျတီးရီးယားပိုးဟာ မှေးညှငျးပေါကျတှထေဲ ပုံမှနျရှိနကေပြိုးတဈမြိုးပါ။ ဒီပိုးတှအေမြားကွီးစုဝေးလာတဲ့အခါ အဆီတှကေိုဖွိုခှဲဖို့ အငျဇိုငျးတှထေုတျပွီး ရောငျရမျးစနေိုငျပါတယျ။ တဈခြို့တှကေ ဒီလိုဓာတျပွုမှုကို ပုံမှနျထကျပိုတုနျ့ပွနျတတျကွပါတယျ။ လူတဈယောကျမှာ ဝကျခွံတဈလုံးနှဈလုံးလောကျပေါကျစလေောကျရုံ အဆီပမာဏဟာ နောကျတဈယောကျမှာတော့ ဝကျခွံအကွီးအကယျြထှကျတာ၊ ဆငျဝကျခွံကွီးတှဖွေဈတာမြိုး ဖွဈစတေတျပါတယျ။
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ တစ်သက်မှာတစ်ခါလောက်တော့ ဝက်ခြံပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အရေပြားရဲ့အဆီဂလင်းတွေကနေ အဆီတွေအများကြီးထွက်လာပြီး မွေးညင်းပေါက်တွေကိုပိတ်တဲ့အခါ ဝက်ခြံဆိုတာဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ချွေးပေါက်ကကြီးရင် ဆားဝက်ခြံဆိုတဲ့ အမည်းစက်တွေဖြစ်တော့တာပေါ့။ တကယ်လို့အပေါက်ကသေးသေးလေးဆိုရင်တော့ အဖြူရောင်အဆီဖုကလေးတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုချွေးပေါက်ပိတ်တာနှစ်မျိုးလုံးက ရောင်ရမ်းတာတွေ၊ ဝက်ခြံတွေ၊ အဖုအကြိတ်တွေ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ ဝက်ခြံအဖုအကြိတ်ကြီးတွေ အရေပြား‌အောက်မှာ နီရဲရောင်ရမ်းလာပြီး အရမ်းကြီးလာတဲ့အခါ ဆင်ဝက်ခြံလို့ခေါ်တဲ့ ဝက်ခြံအမျိုးအစားတွေဖြစ်လာတော့တာပေါ့။
ဝက်ခြံဆိုတာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၊ အဆီပြန်တတ်သူ‌တွေမှာ ဖြစ်တာများပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဝက်ခြံဟာ ၅နှစ်ကနေ၁ဝနှစ်လောက်အထိ ကြာတတ်ပြီး အသက်၂ဝအစောပိုင်းလောက်မှာ သက်သာသွားတတ်ကြပါတယ်။ မျက်နှာမှာအဖြစ်များတယ်ဆိုပေမယ့် လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ကျောကုန်း၊ ပုခုံးနဲ့ လက်အပေါ်ပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်တာများပါတယ်။
အလွဲကြီးလွဲနေတာတွေက ဝက်ခြံဆိုတာ အစားအသောက်ကြောင့်၊ မသန့်ရှင်းတာကြောင့်၊ လိင်စိတ်ထကြွတာတွေကြောင့်ဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ မျိုးရိုးနဲ့ ဟော်မုန်းတွေက ဝက်ခြံအများစုရဲ့ အဓိကတရားခံပါ။ ချော့ကလက်ရှောင်တာ၊ မျက်နှာကိုတစ်နေ့၁ဝကြိမ်လောက်သစ်တာလောက်နဲ့တော့ ဝက်ခြံကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
>> ဒါဆိုရင် ဝက်ခြံဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ?
ဟော်မုန်း : ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာစတဲ့ဝက်ခြံဟာ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုများလာလို့ဖြစ်တာပါ။ လူပျို၊ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာ အမျိုးသားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုံးထုတ်တာများတာကြောင့် အဆီဂလင်းကနေ အဆီတွေပိုထွက်လာပါတော့တယ်။
ဘတ်တီးရီးယား : အဆီတွေပိုလျှံနေခြင်းကြောင့် မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ နောက်ကျောနဲ့ ရင်ဘတ်တွေမှာရှိတဲ့ မွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေပိတ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပိတ်နေတဲ့ချွေးပေါက်တွေထဲ ဘတ်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖွားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေပြားပေါ်မှာ အဆီဖုတွေ၊ ဆားဝက်ခြံတွေ ထွက်လာတော့တာပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ဒီအဖုတွေရဲ့ဖိအားကြောင့် မွေးညှင်းပေါက်နံရံတွေပေါက်ထွက်ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူးတွေကို အဆီတွေစိမ့်ထွက်တဲ့အခါ ရောင်ရမ်းဝက်ခြံဖြစ်တော့တာပေါ့။ ဒီ့ထက်ပိုကြီးပြီး ပိုနာလာတဲ့အခါ ဝက်ခြံဖုကြီးဖြစ်လာပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ချို့တွေက ဝက်ခြံကိုပိုဖြစ်စေပြီး တစ်ချို့တွေက ဝက်ခြံဖြစ်တာကိုတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့တားဆေးထိုးဆေးတွေနဲ့ သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်းတွေဟာလည်း ဝက်ခြံကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့အလေးမသမားတွေနဲ့ အားကစားသမားတွေသောက်တဲ့ စတီးရိုက်တွေကလည်း ဝက်ခြံဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ မွေးကင်းစလေးတွေနဲ့ လသားလေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် ယောင်္ကျားလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ ဝက်ခြံမျိုးကို acne neonatorum, acne infantum လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံလိုအနီကွက်လေးတွေမျက်နှာမှာပေါ်လာပြီး ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတင် ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လသားလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ acne infantum ကတော့ ဖြစ်တာပိုကြာ၊ ပိုဆိုးပြီး အမာရွတ်တွေကျန်တတ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ ဝက်ခြံတစ်လုံးမှမပေါက်ခဲ့ဘဲ အသက်ကြီးလာမှ လူကြီးဝက်ခြံတွေပေါက်လာတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ androgen များလာလို့ပေါက်တာဆိုပေမယ့် ဆရာဝန်တစ်ချို့ကတော့ ဝက်ခြံထထပေါက်တယ်ဆိုတာ androgen ဟော်မုန်းပမာဏထက် အဆီထွက်နှုန်းနဲ့ ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ဘတ်တီးရီးယားပိုးကို လူ့အရေပြားတုန့်ပြန်မှုအ‌ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Propionibacterium acnes ဆိုတဲ့ဘတ်တီးရီးယားပိုးဟာ မွေးညှင်းပေါက်တွေထဲ ပုံမှန်ရှိနေကျပိုးတစ်မျိုးပါ။ ဒီပိုးတွေအများကြီးစုဝေးလာတဲ့အခါ အဆီတွေကိုဖြိုခွဲဖို့ အင်ဇိုင်းတွေထုတ်ပြီး ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ဒီလိုဓာတ်ပြုမှုကို ပုံမှန်ထက်ပိုတုန့်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ဝက်ခြံတစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်ပေါက်စေလောက်ရုံ အဆီပမာဏဟာ နောက်တစ်ယောက်မှာတော့ ဝက်ခြံအကြီးအကျယ်ထွက်တာ၊ ဆင်ဝက်ခြံကြီးတွေဖြစ်တာမျိုး ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။